Meghan Markle ayaa la yaabay ka dib markii Xoghayaha Guud ee Qaranka uu qaatay weerarka & # 039; ilaa DAM Text - TELES MACLUUMAAD
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Meghan Markle ayaa la yaabay ka dib markii Xoghayaha Guud ee Qaranka uu qaatay weerarka & # 039; ilaa DAM Text
Meghan Markle ayaa la yaabay ka dib markii Xoghayaha Guud ee Qaranka uu qaatay weerarka & # 039; ilaa DAM Text
Meghan Markle 37 sano ka hor, ayaa lagu naqshadeeyay "duchess adag" bilihii ugu dambeeyay, sida laga soo xigtay faallooda boqor. Foosha "waxay qaadatay cilladahan" sida dalabaadka Duchess. Isagoo ka hadlaya "Meghan iyo Harry: Dabeecada Aabaha Dabeecadda ah" oo ka socda TLC, ayaa Sabahi u sheegay, "Meghan horay ayuu u soo baxaa, badanaa shan subaxnimo, wuxuu ku dhacaa treadmill ama wax kasta oo uu bilaabo u dir farriimaha qoraalka xubnaha kooxda. waayo, maanta.
Shaqaalaha Royal ayaan hubin in ay ku faraxsan yihiin inay bilaabaan helitaanka qulqulka SMS
"Laakiin xubno ka mid ah shaqaalaha boqornimada ahaayeen ayaan dhab ahaan ma filan ama inaan anigu ma ku hayaa inuu ku soo bilowdo helo gebiyo edbinta ee fariimaha qoraalka ah ka saacadood 5 30 ah oo aroortii ah, taas oo ka xumaadeen oo xumaadeen .
"Laakiin waxaan dhihi lahaa caanu waa isku mid.
iyada, waxaan u maleynayaa in ay ahayd wax aad u liita, dhab ahaantii, in qoyska boqortooyada, waxaa jira gabi ahaanba kala duwan si ay ula hadlaan shaqaalaha. "
Xubin afaraad oo ka tirsan kooxda Duchess ee Sussex ayaa iska casilay bishii lasoo dhaafay ka dib markii ay kooxda ku biirtay. sannadkii hore.
Meghan Markle wuxuu ahaa "naxdin daro" sida ay uga jawaab celinayaan shaqaalaheeda, sida uu qabo faallayste boqortooyo ah (Sawirka: GETTY)
Meghan Markle iyo Prince Harry waxay ka tagayaan Kensington Palace Amy Pickerill, oo ah kuxigeenka xoghayaha gaarka loo leeyahay ee Duchess, ayaa loo shaqaaleeyay inuu badalo xoghayaha gaarka ah ee Duchess kahor inta aan is casilin bishan.
Haweenaydii Pickerill waxay raacday is-casiladii xaaskeeda, Melissa Touabti, oo lix bilood ka soo wareegtay.
Ilo ku yaal Kensington Palace ayaa u sheegay Harper's Bazaar: "Amy baxo ka dib marka ilmuhu yimaado. Duchess waxay noqon doontaa mid aad u murugo leh si ay u aragto tagitaankeeda, laakiin way ku faraxsan tahay sababtoo ah Amy waxay leedahay qorshayaal xiiso leh, oo ay ka mid yihiin wakhti wakhti dibedda ah.
"Amy asal ahaan waxa loo qorsheeyay in uu joogteeyo ugu yaraan ilaa dhamaadka sanadka, laakiin marka ilmuhu soo galo, waxaa macquul ah in la qoro qof ku soo laaban kara shaqada ka dib Duchess ku noqoto gurigeeda. booska rasmiga ah.
"Xaqiiqdii waxay joogi doonaan Taabashada, Amy wuxuu heli doonaa talooyin iyo caawimaad aad u baahan tahay mustaqbalka. "
Dareenka ilaaliyaha duwaanka ayaa sidoo kale iscasilay bishii Janaayo, isaga oo ku adkaynaya xadhigaha in Meghan ay adagtahay in uu shaqeeyo.
Prince Harry iyo Meghan, oo filaya in ilmahooda koowaad dhammaadka Abriil ama horraanta Maajo, ayaa la filayaa inay ka baxaan Kensington Palace bisha soo socota.
Qoraalkan ayaa sidoo kale kala qaybiyay gurigooda Boqortooyada, waxayna si rasmi ah u kala qaybiyeen shaqaalahaan bishan. .
Meghan Markle iyo Prince Harry waxay u guureen Frogmore Cottage (Sawirka: GETTY)
Labada nin ee boqortooyadu waxay ku noolyihiin Kensington Palace London, meel u dhow William iyo Kate iyo saddexda carruurtooda.
Laakiin Meghan iyo Harry waxay u guureen Frogmore Cottage oo ku yaala xeebta Windsor bishaan ka hor dhalashada ilmahooda.
Meghan waxaa la filayaa inuu ku dhalo Frimley Park Hospital, halka Countiga Wessex ay sidoo kale keentay labadeeda caruur.
Lix lix geesood ah oo muuqaal ah oo ay sameeyeen xiddigaha Ivorian ee Instagram (+ images) - Abidjanshow.com
WACS. Manchester United-Barcelona: waxay ogaataa haweenka ciyaartoyda labada kooxood sawirada